Olee nke Bụ́ nke Mbụ n’Ime Ihe Niile E Nyere n’Iwu? | Bịaruo Chineke Nso
Gịnị ka Chineke chọrọ ka anyị na-eme ka obi na-atọ ya ụtọ? Iwu ndị o nyere anyị ka anyị na-edebe hà karịrị akarị? Azịza ya bụ mba. Ihe Jizọs Kraịst bụ́ Ọkpara Chineke kwuru gosiri na e nwere ike ikwu na ọ bụ naanị otu ihe ka Chineke chọrọ n’aka anyị.—Gụọ Mak 12:28-31.
Ka anyị matagodị mgbe Jizọs kwuru ihe ahụ. Ọ bụ na Naịsan 11, mgbe ọ fọrọ ụbọchị ole na ole tupu e gbuo ya. N’oge ahụ, ọ nọ n’ụlọ nsọ na-akụzi ihe. Ndị iro ya bịara na-ajụ ya ajụjụ ka ha mara ma ọ̀ ga-ekwuhie ọnụ. Otú o si zaa ha ajụjụ niile ha jụrụ ya enyeghị ha ọnụ okwu. Jizọs jụziri ha, sị: “Olee nke bụ́ nke mbụ n’ime ihe niile e nyere n’iwu?”—Amaokwu nke 28.
Ajụjụ a tara akpụ. Ụfọdụ ndị Juu na-arụrịta ụka banyere iwu bụ́ nke mbụ ma ọ bụ nke kacha mkpa n’ime ihe karịrị narị iwu isii Chineke nyere ụmụ Izrel. Ọ dịkwa ka ndị ọzọ hà na-ekwu na iwu niile ahụ hà. Ha na-ekwu na mmadụ ikwu na o nwere iwu karịrị iwu ibe ya bụ ihe ọjọọ. Ma, olee otú Jizọs si zaa ajụjụ ahụ?
Mgbe Jizọs na-aza ajụjụ ahụ, o kwuru ihe abụọ e nyere n’iwu. Nke mbụ bụ: “Jiri obi gị dum, jirikwa mkpụrụ obi gị dum, jirikwa uche gị dum, jirikwa ike gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n’anya.” (Amaokwu nke 30; Diuterọnọmi 6:5) Okwu ahụ bụ́ “obi,” “uche,” “mkpụrụ obi,” na “ike” na-apụta otu ihe mgbe ụfọdụ. * Ihe Jizọs na-ekwu bụ na anyị kwesịrị iji ihe niile dị anyị n’ahụ́ na ihe niile anyị nwere hụ Jehova n’anya. Otu akwụkwọ na-akọwa Baịbụl kwuru na ihe Jizọs na-ekwu bụ na “ihe niile anyị na-eme kwesịrị igosi na anyị hụrụ Chineke n’anya.” Ọ bụrụ na ị hụrụ Chineke n’anya otú a, ị ga-eme ihe niile i nwere ike ime kwa ụbọchị ka obi na-atọ ya ụtọ.—1 Jọn 5:3.
Iwu nke abụọ Jizọs kwuru bụ: “Hụ onye agbata obi gị n’anya dị ka onwe gị.” (Amaokwu nke 31; Levitikọs 19:18) Onye hụrụ Chineke n’anya ga-ahụkwa onye agbata obi ya n’anya. Ọ bụ mmadụ ịhụ Chineke n’anya ga-eme ka onye ahụ hụ ndị agbata obi ya n’anya. (1 Jọn 4:20, 21) Ọ bụrụ na anyị ahụ ndị agbata obi anyị n’anya dị ka anyị hụrụ onwe anyị, anyị ga na-emeso ha ihe otú anyị ga-achọ ka ha na-emeso anyị. (Matiu 7:12) Ọ bụrụ na anyị emee otú ahụ, anyị na-egosi na anyị hụrụ Chineke n’anya, bụ́ Onye kere mmadụ niile n’onyinyo ya.—Jenesis 1:26.
E nwere ike ikwu na naanị ihe Jehova chọrọ anyị n’aka bụ ịhụnanya
Ihe abụọ ahụ Chineke nyere n’iwu hà dị ezigbo mkpa? Ee, n’ihi na Jizọs kwuru, sị: “Ọ dịghị ihe ọ bụla ọzọ e nyere n’iwu nke ka ndị a ukwuu.” (Amaokwu nke 31) N’ebe ọzọ e dere ihe a Jizọs kwuru, Jizọs sịrị na ọ bụ n’iwu abụọ ahụ ka iwu niile ọzọ dabeere.—Matiu 22:40.
Ihe Chineke chọrọ ka anyị na-eme adịghị mgbagwoju anya. E nwere ike ikwu na naanị ihe ọ chọrọ anyị n’aka bụ ịhụnanya. Kemgbe ụwa, ihe Chineke na-achọ n’aka ndị na-efe ya bụ ka ha hụ ya n’anya, ọ ka bụkwa ihe ọ na-achọ n’aka ha. Ma, mmadụ ikwu n’ọnụ na ya hụrụ Chineke n’anya abụghị ebe okwu biri. Onye ahụ ga na-eme ihe ndị gosiri na ọ hụrụ Chineke n’anya. (1 Jọn 3:18) Ọ̀ bụ na ọ gaghị adị mma ka ị mụta otú ị ga-esi hụ Jehova n’anya nakwa otú ị ga-esi egosi na ị hụrụ ya n’anya ebe “Chineke bụ ịhụnanya”?—1 Jọn 4:8.
Ebe anyị na-atụ aro ka ị gụọ na Baịbụl n’ọnwa Mach: Mak 9-16–Luk 1-6
^ para. 6 Na Baịbụl, “mkpuru obi” pụtara mmadụ. N’ihi ya, “obi,” “uche,” na “ike” socha ná “mkpụrụ obi.”
mailto:?body=“Olee nke Bụ́ nke Mbụ n’Ime Ihe Niile E Nyere n’Iwu?”%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D2013167%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=“Olee nke Bụ́ nke Mbụ n’Ime Ihe Niile E Nyere n’Iwu?”